WARBIXIN: Suldaanka guud ee Sanaag oo si cad u diiday dalab uga yimi Siyaasiin & Odayaal kasoo jeeda G. Nugaal, Maxaase keenay?
GAROOWE(P-TIMES) – Warsidaha PuntlandTimes wuxuu ogaaday in ay baaqatay qado shalay ay sameyn lahaayeen qaar kamid ah waxgaradka, Ganacsatada & Isimadda gobalka Nugaal, oo ay ku doonayeen in ay kula kulmaan Isimka guud ee gobalka Sanaag Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan.
Warsidaha ayaa ogaaday in qadadaas looga wada hadli lahaa arirmaha ku saabsan dhacdadii dhawaan ka dhacday xarunta golaha baarlamaanka Puntland, isla markaasna qabanqaabadeedu bilaabatay markii ay dhacdadaas ciidamadii fuliyey si gaar ah u hogaamiyeen saraakiil kasoo jeeda magaalada Garoowe.
Afhayeenka baarlamaanka Puntland ee diiday xil ka qaadis lagu sameeyey Khamiistii hore Xildhibaan CabdiXakiim Dhooba-Daareed ayaa sheegtay in beel gaar ah ka sheegatay Garoowe, isagoo ula jeeday beesha dagta oo uu sheegay in ay iyadu sheegatay lahaanshaha magaaladii u dhaxaysay shacabka Puntland.
Suldaanka guud ee gobalka Sanaag Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaam Suldaan Maxamuud ayaa ka cududaartay qadadan, iyadoo wararku sheegayan in uu cadeeyey in uusan hadda diyaar u aheyn.
Warar aan kahelnay qaar kamid ah kooxdii abaabushay qadadan oo la rumeysan yahay in ay gacan-saar la lahaayeen wasiiradda Xukuumadda ugu jira gobalka Nugaal & qaar kamid ah ganacsatada ayaa sheegaya in ay doonayaan in ay iska bari yeelan dhacdadaas.
Xogta aan helnay waxay cadeynaysaa in ka sokow talaabada diidmada ee Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan, haddana ay jireen arrimo ka hor intii aysan dhicin dagaalkii lagu qaaday baarlamaanka ay ku wada hadleen Isimadda Nugaal & Suldaanka oo aan waxba ka fulin.
Majirto faahfaahin dheeraad ah oo laga hayo arrimahan, waxaase horey u jiray in siyaasiinta gobalka Nugaal qaarkood, gaar ahaana kuwa saaxiibada dhaw la ah Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ay ahaayeen maskaxdii ka dambeysay in mooshin laga keeno, ka dibna ciidamo lagu wareejiyo xarunta baarlamaanka, taas oo ahayd mid caro ku beertay gudoomiyaha xilka laga qaaday ee diiday talaabadaas.